Chii chinonzi Pip mune Forex - Ziva zvese nezvePips mune Forex Kutengesa
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - forex basics nyaya - Chii chinonzi Pip mu Forex?
Munyaya ino, tichapindura mubvunzo weipi iri pipi mumusika we forex uye kuti pfungwa iyi inoshandiswa sei mukati Forex wokutengesera. Saka, ingoverenga ichi chinyorwa kuti uone kuti chii chinonzi pips mune forex.
Ndeipi pips mune Forex Kutengesa?
Pips kuchinja kushoma pamutengo wemutengo. Zvakare, ichi ndicho chiyero chakayerwa chekuyera kuti yakawanda sei mwero wekutsinhana wakachinja mumutengo.
Pakutanga, pombi yakaratidza shoma shanduko inofamba iyo Mutengo we Forex unofamba. Kunyange hazvo, nekuuya kwenzira dzakanyanya dzemitengo, iyi tsanangudzo yekutanga haina basa. Netsika, Forex mitengo yakataurwa kune ina nzvimbo nzvimbo. Pakutanga, shanduko shoma mumutengo nenzvimbo yechina yekupedzisira yainzi bomba.
Iyo inoramba iri yeyakaenzana kukosha kune vese broker uye Mapuratifomu, izvo zvinoita kuti zvinyatsobatsira seyero inobvumira vatengesi kuti vataure pasina kuvhiringidzika. Pasina tsanangudzo yakadai, kune njodzi yekuenzanisa zvisiri izvo kana zvasvika pane zvakajairwa mazwi senge mapoinzi kana marangi.
Yakawanda sei imwe Pip iri Forex?
Vazhinji vatengesi vanobvunza mubvunzo unotevera:
Yakakura sei pombi imwe uye yekuyera kuverenga nenzira kwayo?
Kune vakawanda mari maviri, imwe pombi ndiko kufamba kwenzvimbo yechina yekuverenga. Misiyano inonyanya kukosha ndeye forex jozi dzakabatana neJapan Yen. Kune vaviri JPY vaviri, imwe pombi ndiyo kufamba munzvimbo yechipiri yedhisiti.
Iyi tafura inotevera inoratidza iyo forex kukosha kwevamwewo dzakajairika mari pari kuti unzwisise izvo pane Forex zvakaenzana ne:
Forex pombi kukosha (1 mijenya)
Kuenzanisa kwepipi yepipi ye forex pairs
Nekuchinja kwepombi imwe munzvimbo yako, unogona kupindura mubvunzo wekuti ingani pombi inodhura. Ngatiti iwe unoda kutengesa EUR / USD, uye iwe unofunga kutenga imwe yakawanda. Imwe mijenya inodhura zviuru zana emadhora. Imwe pombi ndeye 100,000 yeEUR / USD.
Saka, mutengo wepombi imwe chete kune imwe mijenya ndeye 100,000 x 0.0001 = 10 US Dollars.
Ngatiti iwe unotenga EUR / USD pa1.12250 uye wobva wavhara chinzvimbo chako pa1.12260. Musiyano uripo pakati pezviviri:
Mune mamwe mazwi, mutsauko ipipi imwe. Saka, iwe uchaita madhora gumi.
Chii chinonzi Forex chibvumirano?
Ngatiti iwe wazarura chinzvimbo chako cheEUR / USD pa1.11550. Zvinoreva kuti wakatenga chibvumirano chimwe. Iyi yekutenga mutengo weimwe kontrakiti ichave zviuru zana maEuro. Unotengesa Madhora ekutenga maEuro. Iko kukosha kwe Dollar iwe raunotengesa rinoratidzika neakasikwa nehuwandu hwekutsinhana.
Iwe wakavhara chinzvimbo chako nekutengesa chibvumirano chimwe pa1.11600. Zviri pachena kuti iwe unotengesa maEuro uye utenge maDollars.
Izvi zvinoreva kuti iwe pakutanga yakatengeswa $ 111,550 uye pakupedzisira yakagamuchira $ 111,560 pamubhadharo of $ 10. Kubva pane izvi, tiri kuona kuti pombi imwe ichifamba mushe yako yaakuita madhora gumi.
Ukoshi uhwu hwepips hunoenderana nerega mbiri dze forex dzinotorwa dzinosvika kunzvimbo ina dzeta.
Zvakadiniko nezvemari dzisina kutaurwa kusvika kunzvimbo ina dzechiverengero?
Mari inowoneka zvakanyanya ndeyeJenese Yen. Mapepa emari anobatanidzwa neYen ane tsika yakave yakaratidzirwa nenzvimbo mbiri dzekuverengera, uye iyo forex pips yemapepa akadaro anogadziriswa nenzvimbo yechipiri yedhisiti. Saka, ngatimboona maitiro ekuverenga pips neUSD / JPY.
Kana iwe ukatengesa imwe yakawanda yeUSA / JPY, kuchinja kwepombi imwe mumutengo kuchadhura iwe 1,000 XNUMX Yens. Ngatitarisei muenzaniso kuti tinzwisise.
Ngatiti iwe unotengesa mijenya mbiri yeUSA / JPY pamutengo we 112.600. Imwe yakawanda USD / JPY is 100,000 US Dollars. Naizvozvo, iwe unotengesa 2 x 100,000 US Dollars = 200,000 US Dollars kutenga 2 x 100,000 x 112.600 = 22,520,000 Japan Yen.
Mutengo unofamba uchipesana newe, uye iwe unofunga dzikisa kurasikirwa kwako. Iwe unovhara pa113.000. Imwe pombi yeUSD / JPY ndiyo kufamba munzvimbo yechipiri yedhisiti. Mutengo wafamba 0.40 zvinopesana newe, iri makumi mana emapipi.
Iwe wavhara chinzvimbo chako nekutenga mijenya mbiri yeUSA / JPY pa113.000. Kuti udzikunure madhora zviuru mazana maviri pachiyero ichi, unoda 200,000 x 2 x 100,000 = 113.000 yeJapan Yen.
Iyi i 100,000 Yen kupfuura yako yekutanga kutengesa maDollars, saka une kushomeka kwe 100,000 Yen.
Kurasikirwa 100,000 Yen mune makumi mana emapipi kufamba kunoreva kuti iwe wakarasikirwa 40 / 80,000 = zviuru zviviri zveYen papombi imwe neimwe. Sezvo iwe wakatengesa mijenya miviri, iyi pipi kukosha ndeye 40 Yen pamijenya.
Kana account yako ikazadzikiswa mune imwe mari kunze kwemari yemabote, inokuvadza kukosha kwepombi. Unogona kushandisa chero pombi yekukosha Calculator pamhepo kukurumidza kusarudza chaiyo chaiyo pombi tsika.
Nzira yekushandisa sei pips mune Forex kutengesa?
Vamwe vanoti izwi rekuti pips rinoreva kuti "Ipesenti-In-Point, "asi izvi zvinogona kunge zviri mamiriro etymology yemanyepo. Vamwe vanozvitaura zvinoreva Mutengo Unonakidza Pfungwa.
Chii chinonzi pombi mune forex? Chero kwainobva izwi iri, pips inobvumira vatengesi vemari kuti vataure nezve shanduko diki pamari yekutsinhana. Izvi zvakafanana nekureva kwadzinoita hama yepfungwa (kana kuti bip) zvinoita kuti zvive nyore kukurukura shanduko diki pamari yemari yemhindu. Zviri nyore kutaura kuti tambo yakasimuka, semuenzaniso, nezvikamu makumi mashanu, pane kutaura kuti yakawedzera ne50.
Ngationei kuti mutengo we forex unooneka sei mukati MetaTrader kufananidzira pombi mune forex kamwe zvakare. Nhamba iripazasi inoratidza yekurongedza skrini yeAUD / USD muMetaTrader:
Quote yakaratidzwa mumufananidzo ndeiyi 0.69594 / 0.69608. Tinogona kuona kuti manhamba enzvimbo yekupedzisira nzvimbo akaderera pane mamwe manhamba. Izvi zvinoratidza kuti izvi zvikamu zveapombi. Musiyano wacho pakati pemutengo wekubhadhara uye mutengo wekupa ndeye 1.4 pips. Kana iwe ukangotenga uye kutengesa pakarepo pamutengo uyu, mutengo wechibvumirano uchave 1.8.
Kusiyana pakati pips uye mapini
Ukatarisa skrini pazasi peimwe hwindo rekuraira, uchaona "Chinja Order"hwindo:
Ziva kuti muchikamu che Chinja Order hwindo, pane yekudonha-pasi menyu iyo inokubvumira kusarudza imwe nhamba yemapepa sekumira kurasikirwa kana kutora purofiti. Naizvozvo, pane musiyano wakakosha pakati pemapipi uye pips. Iwo manongedzo ari mune aya anodonhedza runyorwa anoreva kune yechishanu nzvimbo yenzvimbo. Mune mamwe mazwi, iyo fractional pips inogadzira chikamu chimwe chete chegumi chekukosha kwepipi. Kana ukasarudza 50 mapoinzi pano, iwe uchave uri chaizvo kusarudza 5 pips.
Nzira yakanakira yekujaira iwe pips mumutengo we forex ndeye shandisa demo account mu MetaTrader chikuva. Izvi zvinokutendera kuti utarise uye kutengesa pamusika mitengo ne zero njodzi, nekuti iwe unongoshandisa chaiwo mari muhomwe yedemo.
Kana iwe uri kufarira kutengesa masheya, iwe unogona kunge uchinetseka kana pane chakadai chinhu sepombi mukutengesa kwekutengesa. Hongu, hapana kushandiswa kwepips kana tasvika pakutengesa kwemasheya, sezvo paine mamiriro ekugara akatemerwa ekuchinjisa mutengo kuchinja senge pence nemasenti.
Semuenzaniso, mufananidzo uri pazasi unoratidza kurongeka kweApple masokisi:
Nhamba dzese dziri muhuwandu dzinomiririra mutengo muUS Dollars, uye huwandu hwenhamba inomiririra masenti. Mufananidzo uri pamusoro unoratidza kuti mutengo we kutengeserana ndeye masenti masere. Izvi zviri nyore kunzwisisa, saka hapana chikonzero chekuunza imwe izwi senge pips. Kunyangwe dzimwe nguva musika jargon ungasanganisira iro rakareba senge "tick" kumiririra kufamba kwekushanduka kushoma kwemutengo kwakaenzana nesenti.
The kukosha kwepombi mu indices uye zvigadzirwa zvinogona zvakasiyana zvakanyanya. Semuenzaniso, goridhe uye zvisina kuchena mafuta zvibvumirano kana DXY inogona kunge isinga fanane nenyaya yemari kana stock CFD. Saka, zvakakosha kuti kuverenga kukosha kwepombi usati wavhura kutengeserana kunyanya chimbo.
Ikozvino iwe unofanirwa kuziva mhinduro kumubvunzo "chii chinonzi pipi mukutengeserana kwe forex?". Kuziva pamwe nechikamu cheyero chekuchinja mukutsinhana kwemitengo inhanho yakakosha pakuita mutengesi nyanzvi. Semutengesi, iwe unofanirwa kuziva kuti kukosha kwepips kunoverengerwa. Izvi zvinogona kubatsira kuti iwe uzive njodzi inogona kuitika mune yekutengesa. Nekudaro, isu tinotarisira kuti iri ratidziro rakakupa iwe ruzivo rwekutanga kutanga rako rekutengesa basa.
Related articles Maitiro ekuverenga Forex machati Chii chinopararira mune Forex Kutengesa? Dzidza Forex Kutengesa nhanho nedanho